Su'aalaha - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Sidee loo doortaa cabbirka qarkiisa ee taayirka?
Qarka waa inuu lahaadaa dhexroor iyo ballac gudaha ah sida taayirka, waxaa jira cabir heer sare ah oo taayir kasta oo raacaya heerarka caalamiga sida ETRTO iyo TRA. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa shaxda taayirrada & rim-hayaha alaab-qeybiyahaaga.
waa maxay 1-pc rim?
1-PC rim, oo sidoo kale loo yaqaan cirifka hal-jeex ah, waxaa laga sameeyaa hal bir oo bir ah oo salka u ah salka rimiska waxaana loo qaabeeyey noocyo kala duwan oo astaamo ah, 1-PC rim ayaa caadi ahaan ka hooseeya 25 ”, sida qarka xamuulka PC rim waa miisaanka fudud, culeyska fudud iyo xawaaraha sare, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa gawaarida fudud sida cagafyada beeraha, trailer, tele-handler, jeex jeexjeexa, iyo noocyada kale ee mashiinada wadada. Xamuulka 1-PC rim waa fududahay.
waa maxay 3-pc rim?
3-PC rim, oo sidoo kale loo yaqaan gees-jeex-jeexan, waxaa lagu sameeyaa saddex qaybood oo kala ah salka rimiska, giraanta qufulka iyo flange. 3-PC rim caadi ahaan cabirkiisu waa 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5 iyo 17.00-25 / 1.7. 3-PC waa culeys dhexdhexaad ah, culeys dhexdhexaad ah iyo xawaare sare, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka dhismaha sida ardayda fasalka dhigata, kuwa yar yar iyo kuwa dhejiska gawaarida dhejiska ah iyo gaashaaman Waxay kuxiran kartaa wax kabadan 1-PC rim laakiin waxaa jira xadidaada xawaaraha.
waa maxay 4-pc rim?
5-PC rim, oo sidoo kale loo yaqaan shan geesood, waxaa lagu sameeyaa shan qaybood oo kala ah salka hoose, giraanta qufulka, kursiga kuusha iyo laba siddo oo dhinaca ah. 5-PC rim wuxuu caadi ahaan cabirkiisu yahay 19.50-25 / 2.5 ilaa 19.50-49 / 4.0, qaar ka mid ah cirifka laga soo bilaabo cabirka 51 ”ilaa 63” sidoo kale waa shan-gabal. 5-PC rim waa culeys culus, culeys culus iyo xawaare hoose, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka dhismaha iyo qalabka macdanta, sida dozers, gawaarida waaweyn ee gawaarida lagu qaado, kuwa xamuulka qaada, gawaarida qashinka lagu rito iyo mishiinada kale ee macdanta laga qodo.
Immisa nooc oo qarka forklift ah?
Waxaa jira noocyo badan oo qarka forklift ah, oo lagu qeexay qaab dhismeedka waa la kala qaybin karaa, 2-PC, 3-PC iyo 4-PC. Split rim waa yar yihiin waana fududahay oo waxaa adeegsada forklift yar, 2-PC rim waa caadiyado waaweyn, 3-PC iyo 4-PC rim waxaa loo isticmaalaa forklift dhexe iyo weyn. 3-PC iyo 4-PC rimuhu inta badan waa cabbirro yar yar iyo naqshad adag, laakiin waxay qaadi karaan culeys ka weyn iyo xawaare sare.
Waa maxay waqtiga-hogaamintu?
Waxaan caadi ahaan ku dhammeynaa wax soo saarka 4 toddobaad gudahood waxaanan gaabin karnaa 2 toddobaad markii ay xaalad degdeg ah tahay. Waxay kuxirantahay meesha loo socdo waqtiga gaadiidka wuxuu noqon karaa 2 toddobaad ilaa 6 toddobaad, marka wadarta waqtiga hogaamintu waa 6 toddobaad ilaa 10 toddobaad.
Waa maxay faa iidada HYWG?
Waxaan soo saareynaa oo keliya qarka dhameystiran laakiin sidoo kale qarka lebbiska, waxaan sidoo kale siineynaa OEM-ga caalamiga ah sida CAT iyo Volvo, sidaa darteed faa'iidooyinkeennu waa noocyo kala duwan oo Badeecooyin ah, Silsiladda Warshadaha oo dhan, Tayada la caddeeyey iyo R & D Xooggan.
Waa maxay heerarka sheyga ee aad raacaysid?
Afkeenna OTR waxay khuseeyaan heerka caalamiga ah ee ETRTO iyo TRA.
Rinjiyeyn noocee ah ayaad sameyn kartaa?
Rinjigayaga aasaasiga ah waa E-daahan, sawirkeena ugu sarreeya waa budo iyo rinji qoyan.
Immisa nooc oo walxo qar ah ayaad haysaa?
Waxaan haynaa giraan qufulka, giraanta dhinaceeda, kursiga kuusha, fure darawalka iyo flange noocyada kala duwan ee wareegyada laga bilaabo cabbirka 4 "ilaa 63".